Isu hatisati taziva kuti sei Spotify isina rutsigiro rweHomePod | IPhone nhau
Isu hatisati taziva kuti sei Spotify isina rutsigiro rweHomePod
Vazhinji vashandisi ve Spotify uye varidzi veHomePod vari kudzima kunyoresa mimhanzi papuratifomu, vaneta nekumirira kunzwa nziyo dzavanofarira pamutauri wavo weApple.
Uye Spotify, zvakadaro hapana mhinduro. Zvinoshamisa sezvo uchigona kuwana mimhanzi yako yaunofarira kubva kune mamwe maApple Music application, senge Amazon Music. Saka Apple haina chekuita neizvi. Nechimwe chikonzero chisingazivikanwe, Spotify haisati yave nekushandisa kwayo kuchinjirwa kune iyo HomePod. Tichaona kana ichichigadzirisa, kana kutsanangura chikonzero chemamiriro ezvinhu aya.
Vazhinji vashandisi veSpotify vanewo HomePod, vari kukanzura maakaundi ako yemumhanzi wekutepfenyura chikuva, ndaneta nekumirira kuti application ienderane neApple smart speaker.
Pagore rapfuura Worldwide Developers Musangano, Apple yakazivisa kuti yaizowedzera yechitatu-bato mimhanzi sevhisi rutsigiro kuHomePod. Mwedzi mishomanana gare gare, kugarisana uku kwakanga kwatova kwechokwadi, nemapuratifomu e Amazon Music, Pandora o iHeartRadio. Asi Spotify haana kusvetuka pane bandwagon.
Nanhasi, hatisati takwanisa kubatanidza account yedu yeSpotify neHomePod. Kana isu tichida kuti Siri atambe rwiyo kuburikidza neHomePod, isu tinofanirwa kuve neakaundi pane imwe yemapuratifomu ataurwa pamusoro, kana pa. Apple Music, sezviri pachena.
Nei Spotify akaita kutsunga uku kusanzwisisika. Yaive imwe yekutanga mimhanzi mapuratifomu kutsigira vatauri vakangwara kubva Amazon y Google, uye zvakadaro inoramba kuita zvimwe chete neApple's HomePod.
Munguva pfupi yapfuura Apple iri kuzivikanwa zvakanyanya nekusimudzira yayo yekufambisa mimhanzi sevhisi Apple Music. Iwe uchangobva kubatanidza isingarasikirwe ruzha mhando, spatial ruzha uye Dolby Atmos, uye iri kupa mwedzi mitatu nemitanhatu yemahara yekushambadzira nekutenga kwemimwe michina. Zvichida Spotify yanga isiri kusekesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Isu hatisati taziva kuti sei Spotify isina rutsigiro rweHomePod
Password maneja Lockwise achamira kugamuchira zvigadziriso muna Zvita
Nakidzwa nemukati me iPhone yako neaya anotyisa mapikicha